Saddex qalad oo ragga badankood ay ku sameeyaan guurka | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Saddex qalad oo ragga badankood ay ku sameeyaan guurka
Saddex qalad oo ragga badankood ay ku sameeyaan guurka
Aayaha editor Send an email March 9, 2019
Badanaa ragga waa kuwo bilaaba xiriirka iyagoo wata qorsheyaal dhab ah oo ay ku doonayaan in xiriirka ay uga dhigaan mid shaqeeya balse qaakood waa kuwo xiriirka ku sameeyaan qaladaadkan iyagoo aanan ogeyn, kuwaas oo dhaawacaya xiriirkooda.
Hoos ka akhriso 3 qalad oo ragga badanaa ay xiriirka ku sameeyaan.
Inaadan la socon dareenka xaaskaaga
Kani waa hal qalad oo intabadan raggu ay ku sameeyaan xiriirkooda. Inaadan la socon dareenka xaaskaaga waa qalad aad u weyn oo nin kasta u baahanyahay inuu joojiyo. Waxay xaaskaaga kaa rabtaa inaad la socotid dareen ahaan sidaa darteed il gooni ah sii dareenkeeda sidoo kalana taageer. Inaadan intaas u sameyn waa qalad weyn oo aad guurkaaga ku sameysay.
Inaad aad uga mashquusho
Waxaa hubaal ah inay rabto inaad guul ka gaarto shaqadaada iyo dadaalkaaga balse inaad aad uga mashquusho waa qalad weyn. Ma rabto inaad shaqada darteed iskaga deyso balse waxay kaa rabtaa inaad isku dheeli tirto shaqada iyo xiriirka, way kuu bahantahay gabadha walaal.
Inaadan siinin sabab ay kugu aaminto
Ragga qaarkood way ku guul dareystaan fahamka in kalsoonida la kasbado isla markaana qofna uusan ku aamineyn haddii aadan siinin sabab uu kugu aamino.
Waa inaad siisaa sabab ay kugu aaminto adigoo meesha ka saaraya waxyaabaha keenaya aamin darrada isla markaana noqonaya qof nadiif ah. Kuma aamini karto gabadha markaad ka qariso waxyaabaha qaar ee qeybta ka ah noloshaada. Daacad noqo mar kasta si aad u hanato kalsoonideeda.
Warning signs you need to deworm
Wax Ka Ogoow Faa’idooyinka Caafimaad Uu Leeyahay Diinsiga & Cuduro Lama Filaan Ah Oo Lagu Daaweeyo
Farriimo Macaan Oo Habeenkii Loo Diro Gabadha Aad Jeceshahay